हातखुट्टा मर्किनु भनेको कस्तो समस्या हो? – Kumbha Khabar
हातखुट्टा मर्किनु भनेको कस्तो समस्या हो?
On २३ असार २०७६, सोमबार ०६:२५
प्रश्न: हातखुट्टा मर्किनु भनेको कस्तो समस्या हो? मर्किने समस्या हुँदा के के हुन्छ? के के सावधानी अपनाउन सकिन्छ? – जेपी